१० अर्ब पूरा भयो जिमेलको डाउनलोड, अरु कति छन् यो आँकडा पार गर्ने एप ? « Tech News Nepal
१० अर्ब पूरा भयो जिमेलको डाउनलोड, अरु कति छन् यो आँकडा पार गर्ने एप ?
काठमाडौं । गुगलको ई-मेल सर्भिस जिमेल विश्वभर निकै लोकप्रिय छ । जसको एन्ड्रोइड एपले प्ले स्टोरमा १० अर्ब डाउनलोडको आँकडा पूरा गरेको छ । जिमले प्ले स्टोरमा १० अर्ब डाउनलोड पूरा गर्ने पहिलो एप भने होइन ।
रोचक कुरा त के छ भने यी चारै एप गुगलकै हुन्, जसले एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा १० अर्ब डाउनलोडको आँकडा पार गरेका छन् । सामान्यतया व्यक्तिगत ई-मेलका लागि जिमेल प्रयोग हुने गरेको छ ।